पत्रकार पाण्डे र उपप्रधानमन्त्री यादवबीचको अन्तवार्ता भाइरल, आखिर के भएको थियो ? (भिडियो) - Nepal Post Daily
पत्रकार पाण्डे र उपप्रधानमन्त्री यादवबीचको अन्तवार्ता भाइरल, आखिर के भएको थियो ? (भिडियो)
काठमाडौं । एक टेलिभिजनमा आइतबार साँझ उपप्रधान एवंम स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई लिइएको अन्र्तवार्ता एकाएक भाइरल बन्न पुगको छ । एभिन्यूज टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा पत्रकार सुशील पाण्डेले उपप्रधान यादवसँग लिएको अन्तर्वार्ता भाइरल बनेको हो ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्रीलाई अतिथी बनाइएको कार्यक्रमको शुरुवातमा उनले भने – संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखेर कम्युनिस्ट सरकार यतिखेर शासन गरिरहेको छ । उसको फुर्तिफार्ती ठूलै छ । कर्मकाण्डी ढंगबाट सरकार चलिरहेको छ, जनताहरु निराश बन्दै गइरहेका छन् ।
पत्रकार– नेपाली प्र्रेस लडेको छैन ?
पत्रकार– भ्रष्टचार, के भइरहेको छ थाहा छ ?
पत्रकार– वाइडबडीमा के भयो, चिनी सुन काण्ड के भयो, काण्डै काण्डमा किन सरकार लिप्त छ ?
मन्त्री– अनि हावामा भलमा हुन्छ ?
पत्रकार– हावामा पटक्कै छैन मन्त्री न्जू, तपाईलाई जवाफ दिन मन छैन भने सोध्दिन तर हावा तालमा प्रचार गरेको होइन
Previous articleतराई मधेस अन्नको भण्डार भएपनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु दुःखद भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ
Next articleअपडेट — एभिन्युज टेलिभिजनको ब्युरो कार्यालयमा समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा तोडफोड